Author Topic: Calaamadaha Foosha (Signs of labor) (Read 77231 times)
« on: December 13, 2007, 02:18:40 PM »
Baro calaamadaha foosha si aad u ogaato goorta aad isbitaalka dhalmo u aadaysid. Haddii aad wax calaamado ah oo fool aad isku aragto 36 toddobaad ka hor ama 9 bilood uurka, isla markiiba la xiriir takhtarkaaga.
Calaamadaha fooshu waa maroojin iyo dillaacida xuubka.
Maroojintu waxay dhacdaa marka murqaha ilmo galeenku ay giigsamaan ayna is kala dabciyaan maadaama uu ilmo galeenku isu diyaarinayo dhalmo.
Maroojinta Foosha Beenta ah
Kuwaani waxay dhacaan waqtiga bisha ugu danbeysa ee uurka. Waxay yihiin:
• Kuwo aan is dabajoog ahayn.
• Isuma soo dhawaadaan waxaana laga yaabaa in uu joogsado saacad ka dib ama sidaasoo kale.
• Badanaa lagama dareemo dhabarka.
• Waxay joogsadaan marka la socdo.
• Xanuunku waqti ka dib ma sii kordho.
• Ma sababo inuu ilmo galeenku isbeddelo.
Maroojinta Foosha ee Saxda ah
• Waxay dhacaan waqtiyo is daba joog ah waxayna ku dhammaadaan 30-60 ilbiriqsi.
• Way isu dhowaadaan waqti ka dibna xanuunku wuu sii bataa.
• Waxaa laga yaabaa in laga dareemo dhabarka hoose iyo uur ku jirta hoose.
• Wuu sii socdaa ama sii kordhaa marka lala socdo.
• Ilmo galeenka ayaa ka caawiya in uu jilco, khafiif noqdo, una u furmo dhalidda.
Haddii ay kula tahay in ay fool ku hayso:
• U seexo, haddii ay suuragal tahay, dhinacaaga bidix.
• Cun ama cab cuntooyin fudud oo keliya.
• Maroojinta saacad u fiiri. Haddii hal maroojin ay billaabato 9:10 tan ku xigtana ay billaabato 9:16, waxaa u dhexeeya 6 daqiiqadood.
• Aad rugta caafimaadka ama isbitaalka marka maroojintu ay:
- U dhexeyso 5 daqiiqadood ilaa 2 saacadood uurka ugu horreeya
- U dhexeyso 5 daqiiqadood ilaa 1 saac uurarka kale
- Sida uu takhtarkaaga ama rugta caafimaadku ay ku fareen.
Dillaaca xuubka, oo loo yaqaanno biyaha soo jabay, waa dheecaan dhibco ama burqan ah oo kaa yimaada marka uu kiish dheecaan ah oo ilmaha ku hareereysan uu dillaaco.
Dheecaanku badanaa waa mid biyo cad ah, laakiin waxaa laga yaabaa in uu cad yahay ama cagaaran yahay. Kiishka biyaha ahi waqti kasta ayuu dillaaci karaa. Waxaa laga yaabaa in uu dillaaco ka hor inta aadan dareemin maroojinta waxaana laga yaabaa in uu soo daato waqtiga maroojinta.
• Haddii ay kula tahay in biyahaagii soo dillaaceen, Si degdeg ah ku aad isbitaalka.
• Ha qubeysan.
• Waxaad xiran kartaa suufka dhiigga oo kaliya.
Haddii aad faahfaahin dheeraad ah u baahan tahay ama su'aalo kale aad qabtid ku soo gudbi halkaan: http://somalidoc.com/smf/index.php/board,31.0.html
Started by MutaweliBoard Cudurrada Haweenka
Views: 36511 June 28, 2014, 02:30:53 AM
Su'aal: Jiarada TB da iyo calaamadaha lagu garto maxay yihiin?
Started by Awliyo128.cali.ccc.14Board Qaybta Su'aalaha
Views: 5355 June 01, 2016, 08:39:44 PM
Su'aal: Maxaa lagu gartaa calaamadaha qawidka?
Started by SaraaliBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 7353 March 30, 2016, 04:31:47 PM
Su'aal: Waxaan isku arkay calaamadaha Gaastrik?
Started by Husein Abu BakarBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 2503 January 21, 2018, 06:49:59 AM
Su'aal: Waxaan isku arkay calaamadaha baabasiirta?
Started by Maxamed ismaciilBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 2839 December 20, 2018, 10:05:42 PM